Real Madrid Oo Soo Bandhigtay Laba Macalin Oo U Sharaxan Badalka Zinedine Zidane
HomeWararka CiyaarahaReal Madrid oo soo bandhigtay laba Macalin oo u sharaxan badalka Zinedine Zidane
December 4, 2020 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Spain 0
Real Madrid ayaa u aqoonsatay Mauricio Pochettino iyo Raul inay yihiin labada musharax ee badali kara tababare Zinedine Zidane , sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday Spain.
Guuldaradii ka soo gaartay Shakhtar Donetsk habeenkii talaadada ayaa aheyd tii shanaad ee Real ee kaliya 16 kulan oo ololahan ah, taasoo shaki gelisay mustaqbalka Zidane.
Tababaraha reer France ayaa si cad ugu sheegay maamulka kooxda in uuna is casili doonin Real Madrid-na ay rajeynayso in uu wax ka badali karo arintaas laakiin kooxda ayaa leh qorshayaal u degsan hadii ay dareento in wakhtigu ku haboon yahay in uu Zidane sii wado.
Pochettino ayaa loo maleynayaa inuu yahay bartilmaameedka koowaad ee Los Blancos, isagoo hore ugu dhawaaday inuu u magacaabo ninka reer Argentine bedelka Rafael Benitez kaliya Daniel Levy ayaa diiday inuu u fasaxo maamulihiisa markaas.
Wargayska MARCA ayaa sheegaya in Pochettino uu xiisaynayo qabashada shaqada Bernabeu isla markaana heshiiska qandaraasku uu noqon doono mid toos u toosan sababo la xidhiidha wadahadaladii ay hore u yeesheen.
Si kastaba ha noqotee, Paris Saint-Germain iyo Manchester United ayaa sidoo kale lala xiriirinayay tababarihii hore ee Tottenham Hotspur, sidaas darteed Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay dalab labaad u dirtay halyeeyga kooxda Raul.
Raul, oo ahaa gooldhaliyaha ugu goolasha badnaa taariikhda Madrid ilaa uu Cristiano Ronaldo dhaafo rikoorkiisa, ayaa haatan hogaaminaya kooxda Castilla ee kooxda waxaana loo arkaa inuu yahay tababaraha mustaqbalka ee kooxda koowaad.
Si kastaba ha noqotee, guddiga ayaa ka caga jiidaya inay magacaabaan isaga horaantii xirfaddiisa tababarenimo, gaar ahaan kooxdii ugu horreysay ee la halgameysa qaab ciyaareedka sida ay hadda yihiin.
Zidane ayaa ku hogaamiyay Los Blancos seddex koob oo Champions League ah iyo labo La Liga intii uu la joogay kooxda reer Spain tan iyo 2016.